ဘယ်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ 4G LTE တွင်အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ရှိသနည်း။ ulator Emulator.online ▷🥇
အီတလီနိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များသည်အတိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဓိကမိုဘိုင်းအင်တာနက်အော်ပရေတာလေးခုအနက်နှစ်ခုနှင့် ၀ င်းဒိုးသုံးခုကြားတွင်ပေါင်းစည်းပြီးနောက် Iliad ၏အော်ပရေတာနယ်ပယ်သို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည်အခြားရိုးရာအော်ပရေတာများ (တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းသုံးစွဲသူ ၃ သန်းကျော်) နှင့်အပြိုင်အဆိုင်များနေသည်။ သို့သော်ဤသူအပေါင်းတို့အော်ပရေတာအကြား သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အရာများကိုရွေးချယ်သင့်သနည်း။ အော်ပရေတာကိုယ်တိုင် (မကြာခဏမှားယွင်းသော) မှကမ်းလှမ်းသောကြော်ငြာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များ၏မှားယွင်းသောကတိများကိုယူရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့အတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောforရိယာအတွက်မှားယွင်းသောအော်ပရေတာကိုညွှန်ပြရန်လွယ်ကူသည်။
ငါတို့တကယ်သိချင်ရင် ဘယ်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ 4G LTE တွင်အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏areaရိယာတွင်သင်သည်သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောလမ်းပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောလွှမ်းခြုံမှုရှိမရှိသင်တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန်တတိယပါတီများမှသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအော်ပရေတာများ၏အသုံးပြုသူများမှပြုလုပ်သောလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုဤနေရာတွင်ပြပါလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်အော်ပရေတာနှင့်မည်သည့်မြန်နှုန်းကိုရနိုင်သည်
အဖတ်ကိုလည်း: မိုဘိုင်းဒေတာကွန်ယက်ကိုစမ်းသပ် app ကို
အောက်ဖော်ပြပါအခန်းများတွင်တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်မြို့တော်သို့မဟုတ်သူတို့နေထိုင်သောလမ်းပေါ်ရှိအရှိန်အဟုန်ကိုသိရှိလိုသူများအတွက်သင်တို့၏စမ်းသပ်မှုများကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားကိရိယာများကိုပြလိမ့်မည်။ SIM ကိုပထမဆုံး ၀ ယ်စရာမလိုဘဲလွတ်လပ်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခြင်း။ ထိုအချိန်မှာ 4G LTE နည်းပညာကိုသာတွေ့မြင်ရမှာပါအလွန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပြီးအခြေအနေအားလုံးနီးပါးတွင်ကောင်းမွန်သောအမြန်နှုန်းကိုပေးနိုင်သည် (5G ကိုမြို့ကြီးများတွင်သာတွေ့ရသည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းလိုင်းပေါ်ရှိပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းတွင်အကောင်းဆုံးအီတလီအော်ပရေတာသည်ချက်ချင်းသိလိုလျှင်၊ အမြန်ဆုံးမိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သော SpeedTest မှပေးသော PDF ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုမှဖော်ပြသောဂရပ်နှင့်ဒေတာအရ၊ အီတလီတွင်အမြန်ဆုံး LTE ကွန်ယက်ဖြစ်သည် လေတိုက် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၃.၉၂ (Speedtest ဆုရသူ) နှင့်အတူ။ ကျနော်တို့နောက်ကွယ်မှ 43,92 မှတ်နီးပါး တိ မှတ် ၃၂.၉၅ မှတ်၊ အိလီ 31,34 မှတ်နှင့်အံ့အားသင့်အမြီးနှင့်အတူ Vodafoneသာ 30,20 မှတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုရောက်ရှိသော။ ဤအချက်အလက်များသည်clichésများစွာကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည့်အံ့အားသင့်စရာများစွာရှိသည်။ Wind Tre သည် ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး TIM (အီတလီနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုအစဉ်အမြဲယူမှတ်ခံရသည်) နှင့် Vodafone သည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောပြိုကျခြင်း၊
ဤအချက်အလက်များကို စုစည်း၍ မှန်ကန်စွာအနက်ဖွင့်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတစ်ခုကိုစဉ်းစားရမည် မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်လွတ်လပ်သောခန္ဓာကိုယ်ဆိုလိုသည်မှာ OpenSignal (ကျော်ကြားသောလျှောက်လွှာပိုင်ရှင်များ) ။ Broadband Snapshots စာမျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ကြီးများ၊ ဆင်ခြေဖုံးများနှင့်ကျေးလက်ဒေသရှိအော်ပရေတာအားလုံး၏လွှမ်းခြုံမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအီတလီ၏အဓိကဒေသများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဇယားများကိုသေသေချာချာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Fastweb နှင့် TIM (အထူးသဖြင့်ဆင်ခြေဖုံးဒေသများ) တွင်အခြေအနေအားလုံးနီးပါးတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ WindTre သည်မြို့ပြများတွင်အမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေသတွင်လွှမ်းမိုးသည် Vodafone သည်ဤကိစ္စတွင်အဆိုးရွားဆုံးအော်ပရေတာလည်းဖြစ်သည် (အကယ်၍ Lombardy နှင့် Sicilia ၏မြို့ပြဒေသများကိုဖယ်ထုတ်ထားလျှင်) ။ Iliad အော်ပရေတာသည်ဤဂရပ်တွင်ပျောက်နေသည်။ ၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်စဉ်းစားသည်မဟုတ်ပါ (နောင်တွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်ခြင်းအကြံဥာဏ်များကိုမလိုက်နာလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏inရိယာသို့မဟုတ်အိမ်၌ကွန်ယက်အမြန်နှုန်းကိုမထိချင်ပါသလော။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် လွှမ်းခြုံမှုနှင့်မြန်နှုန်းမြေပုံ Nperf ကိုကမ်းလှမ်းသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ site မှကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှု (LTE နှင့် LTE Advanced) နှင့်သုံးစွဲသူများပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများမှဖော်ပြသောအမှန်တကယ်မြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်အော်ပရေတာကိုရွေးချယ်ရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။ အော်ပရေတာရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နှိပ်ပါ ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှု ဒါမှမဟုတ်သူ download speed မည်သည့်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောမြို့၊ areaရိယာသို့မဟုတ်လမ်းကိုရှာရန်အောက်ပါမြေပုံကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်လိုသောနေရာ၊ မြေပုံ၏ဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်းရှိရှာဖွေရေးအကွက်ကိုလည်းသုံးပါ။ ဤကိရိယာသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်အသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်ရန် (သို့) ငှားရန်ရှိလျှင်၊ မည်သည့်အော်ပရေတာကောင်းသည်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်နံပါတ်ကိုထိန်းထားစဉ် SIM ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လျှင်လမ်းညွှန်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ နံပါတ်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန်နှင့်ဖုန်းကမ်းလှမ်းမှုကိုပြောင်းလဲနည်း.
တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကိုသုံးနိုင်သည် OpenSignal applicationAndroid နှင့် iPhone အတွက်အခမဲ့ရနိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်အားလုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီတလီရှိမည်သည့်လမ်းမဆိုLTရိယာအတွက် LTE လွှမ်းခြုံမှုနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည်မှာအောက်ခြေရှိ menu ကိုဖွင့်သည် မြေပုံ, ငါတို့အနေအထား၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ menu ရဲ့ထိပ်မှာနှိပ်ပါ 2G / 3G / 4G အားလုံး, သင်စမ်းသပ်ရန်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကိုရွေးချယ်နိုင်သောနေရာနှင့်ကွန်ယက်အမျိုးအစားကိုသော့ဖွင့်ရန် (ဤစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်ပစ္စည်းကိုသာချန်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ 4G).
အမှီအခိုကင်းသောအဖွဲ့အစည်းများ၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏forရိယာအတွက်အကောင်းဆုံးအင်တာနက်အော်ပရေတာကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်ချောက်များနှင့်ကြော်ငြာများသို့မရောက်ရှိဘဲအများဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့်အမြဲသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည် အော်ပရေတာများသည်ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်ရေဒီယိုကိုမကြာခဏသွားကြသည်။ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများကဆိုသည် Wind Tre သည်အီတလီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်ဒီရလဒ်ကိုသတိထားပြီးယူရမှာဖြစ်ပာတယ်။ သူတို့ရဲ့လွှမ်းခြုံမှုကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီး ၄ င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ် (သို့) ရုံးမှာကောင်းကောင်းနေနိုင်အောင်လုပ်တာကပိုကောင်းတယ်။
ပိုမိုမြန်ဆန်သောမိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေပါက 5G ကိုအဓိကအာရုံစိုက်ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း 4G ထက် ပို၍ မြင့်သောအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် 5G လွှမ်းခြုံမှုကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ.
အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသေမျဉ်းကြောင်းအတွက်ဖိုင်ဘာအော့ပ်၏လွှမ်းခြုံမှုကိုအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည်။ TIM, Fastweb, Vodafon, WindTre နှင့်အခြားသူများအတွက်ဖိုင်ဘာလွှမ်းခြုံမှု mi အကောင်းဆုံး Fiber Optic: လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးပါ.
TV ပေါ်မှာ Mediaset Play ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ
Chrome, Firefox, Edge နှင့် Safari ရှိ cookies များကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
စမတ်နာရီကဲ့သို့ချွေတာပြီးအသုံးဝင်သောအကောင်းဆုံး SmartBands များ
Xiaomi ကိုဘယ်လို bootloader လုပ်မလဲ